Apple dia manizingizina ireo mpiasany amin'ny faran'ny fandefasana telefaona amin'ny volana septambra | Avy amin'ny mac aho
Azo antoka fa opera savony mahery eo amin'ny tanan'i Apple sy ny mpiasan'izy io. Avy amin'ny orinasa dia mijanona ho mafy orina amin'ny fanapahan-kevitra tapaka momba ny miverina miasa amin'ny volana septambra ho an'ny mpiasanao rehetra ary noho izany dia mamarana ny telecommunications izay tohizan'arivony maro amin'izy ireo. Betsaka amin'ireo mpiasa ireo no manohitra ity fanapahan-kevitra ity ary maro ny fitarainana momba izany izay tonga hatrany amin'ny CEO an'ny orinasa Tin Cook aza.
Tany am-piandohan'ity volana ity, Cook dia nandefa taratasy anatiny ho an'ireo mpiasa milaza ny drafitry ny orinasa hiverina hiasa manokana mandritra ny telo andro isan-kerinandro amin'ny volana septambra manaraka. Toa tsy raisin'ireo mpiasa tsara izany na dia tsy isalasalana aza fa fiverenana miasa izay tadiavin'ny iray amintsika, fa raha fintinina dia zon'izy ireo ny mitaraina ary nanao izany izy ireo na nampahafantatra izany tamin'ny orinasa mihitsy taorian'ny fanambarana.
ny Deirdre O'Brien, dia namaly indray ireo fitarainana tamin'ny alàlan'ny horonantsary nalefa ho an'ny mpiasa ary tafaporitsaka tamin'ny mpanelanelana malaza, The Verge. Ny filoha lefitra ambony an'ny varotra sy ny mpiasa ao Apple dia nilaza fa ny fiasana manokana dia "tena ilaina" mba hanohizana ny fanatsarana ny vokatra Apple sy ny kolontsain'ny orinasan'izy ireo ary lakilen'ny famoahana sy ny fampandrosoana ireo vokatra vaovao.
Mazava ho azy, ny toe-javatra toy izany dia mbola tsy niainan'i Apple ary mazava ho azy fa misy orinasa teknolojia hafa ankehitriny, fa amin'ny farany ny zava-dehibe eto dia ny fametrahana fifandraisana akaiky araka izay azo atao amin'ny fiainam-pianakaviana sy ny asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple dia manizingizina ireo mpiasany amin'ny faran'ny fandefasana telefaona amin'ny volana septambra
Nomad Curved Surface Mount ho an'ny AirTags